Puntland Baarista Hidasidaha DNA ku kala Saaraysa 50 Carruur ah Oo la isku Haystay. -
Hay’adda Puntland u qaabilsan baarista danbiyada hidasidaha DNA iyo Raadadka faraha ee loo yaqaano Forensic Science, ayaa sheegtay in ay kala saartay 50 carruur ah oo ay isku haysten dad sheeganayay inay dhaleen.
Dr.Cabdirashiid waxa uu tilmaamay in ay baaritaankaan 100% u adeegsadeen habka loo yaqaano “STRs” oo ah isbarbar dhigga ku celcelisyada halbeegga DNA, oo ah marka la rabo in la kala saaro laba qof ama in kabadan.
Puntland Forensic Science waa xaruntii baartay oo kala caddeysay dadkii ka dambeeyay kufsigii iyo dilkii loo geystay Caa’isha Ilyaas Aadan.
Puntland ayaa ah meesha kaliya ee Soomaaliya laga hirgaliyay xaruntaan oo muhiim u ah baaritaanka danbiyada hidasidaha DNA iyo Raadadka faraha ee loo yaqaano.